मानसिक रोगी हुन बाट बच्ने उपायहरू
तितोपाटी डट कम - हाम्रो केही बानीले हाम्रो दिमागलाई क्षती पुर्याइरहेको हुन्छ । जसका कारण हाम्रो स्मरणशक्ति र एकाग्रता प्रभावित हुनुका साथै हामीलाई मानसिक रोगी पनि बनाइरहेको हुन्छ । दिमाग हाम्रो शरिरको महत्वपूर्ण अंग हो किनभने यसले हाम्रो शरिर र भावनालाई नियन्त्रणमा राख्छ । यो हाम्रो शरिरको ‘स्टोरहाउस’ हो । दिमागमा स्टोर भएका सूचना, अनुभव र भावनाको मद्दतले हामी सजिलै जीवनयापन गर्न सक्छौं र अभिव्यक्त गर्न पाउँछौं । मुटुजस्तै दिमाग पनि बाँच्नका लागि महत्वपूर्ण छ किनभने दिमागबिना हाम्रो शरिर कुनै कामको छैन । दिमागलाई क्षती पुर्याउने हाम्रो केही बानीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।ब्रेकफास्ट छोड्नुःबिहानको नास्ता हाम्रो शरिर र दिमागका...
मोटोपनको मुख्य जड पेटको बोसो कसरी कम गराउने ?
तितोपाटी डट कम - मोटोपन कसरी घटाउने, तौल कसरी कम गर्ने ? अहिले धेरैको निम्ती टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ यो । यसैको समाधानका लागि कोही जिम धाइरहेका छन्, कोही योगको शरणमा पुगेका छन् । कसैले चिकित्सकिय विधी अपनाएका छन् । मोटोपन खासगरी पेटबाट शुरू हुन्छ । जब पेटमा बोसोको मात्रा बढ्छ, मानिसकोशरीर ह्वात्तै मोटो देखिन्छ । मोटोपनका कारण रप् साैन्दर्यलार्इ प्रभाव पार्छ ।मोटोपनकाे कारण मानिस चिन्तित बनेको देखिन्छ भने मोटोपन घटाउनकालागि अनेक तरिका अपनाइन्छ । तर स्वास्थ्यको लागि कतिपय घरेलु तरिका नै लाभदायक हुन सक्छन । यदि तपार्इ मोटोपन कम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।...
तपार्इंको रोग निरोधक क्षमता कस्तो छ ?
2018-05-06 | कोसेलीन्यूज
तीतोपाटी डट कम - इम्युनिटी अर्थात् रोगप्रतिरोधक क्षमता भनेको शरीरको टक्सिनसँग लड्ने क्षमता हो । यो टक्सिन ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस, प्यारासाइट र अन्य हानिकारक पदार्थ हुनसक्छ । हाम्रो इम्युनिटी बलियो छ भने रुघाखोकीबाट सजिलै बचाउँछ अनि हेपाटाइटिस, फोक्सोको संक्रमण, मिर्गौलाको संक्रमणलगायत अनेकौं रोगबाट बचाउँछ । हाम्रो वरिपरि कैयौं प्याथोजिनहरू हुन्छन् । हामीले थाहा नपाइकनै खाना र पानीका साथ, अझ सास लिँदा पनि, हानिकारक तत्त्वहरू शरीरले सोसिरहेको हुन्छ । यस्तो हुँदा पनि सबैजना बिरामी पर्छन् भन्ने होइन । इम्युन सिस्टम बलियो हुँदा शरीरले बाहिरी संक्रमणसँग राम्ररी लड्छ । हाम्रो रोगप्रतिरोधक क्षमता रक्तपरीक्षणबाट पत्ता लाग्छ तर शरीरले पनि अनेकौं संकेत दिन्छ । तपाईं अरूहरूभन्दा बढी...
रक्सीजन्य पदार्थको सेवनले अायु घट्छ बढ्दैन
तीतोपाटी डट कम - बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले हालै गरेको एक अध्ययनमा सातामा पाँच गिलासभन्दा बढी रक्सी पिउनु जोखिमयुक्त रहेको र यसले व्यक्तिको आयुलाई नै छोट्याउन सक्ने पत्ता लागेको छ।ब्रिटिस हार्ट फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चालित उक्त अध्ययनले धेरै रक्सी पिउँदा यसले हृदयाघातका साथै मृत्युसमेत हुनसक्ने जनाएको छ। ठिक्क मात्रामा दैनिक पिउनु भनेको मुटुलगायत शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने बुझाइ राख्नेका लागि यो अध्ययनको नतिजा एउटा ठूलो चुनौती बन्नसक्ने देखिन्छ।विश्वभरका १९ देशका ६ लाख मानिसको हृदय र पिउने बानीलाई आधार बनाएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनका अनुसार सबैभन्दा उच्चतम पिउनयोग्य मात्रा भनेको सातामा पाँच गिलास मात्रै हो। योभन्दा बढी जति मात्रामा रक्सी सेवन...
मेरो विवाह भएको नौ वर्ष भयो । हामी दुवै जना २९ वर्ष पुग्यौं । हाम्रो आठ वर्षको छोरा पनि छ । आजको मितिसम्म आइपुग्दा मेरी श्रीमतीलाई पहिलेको तुलनामा कम उत्तेजना हुन्छ भने मलाई बढी । मलाई हप्तामा तीन पटक सेक्स गर्नुपर्छ, तर उनी भने यसमा त्यति इच्छा देखाउँदिनन् । यसले गर्दा म आफ्नो यौन चाहना पूरा गर्न हस्तमैथुन गर्छु, तर यो कार्य मेरी श्रीमतीलाई मन पर्दैन । यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नुपर्ला ? ५५७९ यौनेच्छामा कमी सबै व्यक्तिमा एकैनासको यौनेच्छा हुँदैन, कसैमा बढी हुन्छ भने कसैमा कम । त्यसैगरी कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा पनि सधैं एकनासको यौनेच्छा हुँदैन ।...
ढाड दुख्नुका कारण र समाधानका उपायहरू
तीतोपाटी डट कम - हिजोआज लामो समय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने बानीका कारण ढाड दुख्ने समस्या सामान्य भएको छ । भागदौडको जीवन, लामो समयसम्म कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने, गलत तरिकाले एकै ठाउँमा बस्ने तथा व्यायाम नगर्ने बानीका कारण पनि पहिले पहिले ५० वर्ष नाघेपछि मात्र देखा पर्ने यस्ता समस्या हिजोआज जसलाई पनि भएको सुनिन्छ ।त्यसो त ढाड दुख्ने समस्या कष्टकर हुनुका साथै असहज पनि हुन्छ । यद्यपि यो समस्या गम्भीर भने हुँदैन ।विशेषज्ञहरूका अनुसार ढाड दुख्ने समस्या ढाडको हड्डी, मांसपेशीको मजबुती, लिगामेन्टले कसरी काम गरिरहेको छ र त्यो एकआपसमा कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरामा आधारित हुने गर्छ ।के कारणले...
सेक्सले शरीरलार्इ सुन्दर बनाउँछ
2017-12-18 | तीतोपाटी डट कम
तीतोपाटी डट कम - शारीरिक सम्पर्कका बारेमा मानिसहरू खुलेर बहस गर्न चाहँदैनन् । कतिपय सेक्सबारेको समस्यासमेत बताउन नसक्दा गम्भीर रोगको सिकार पनि भइरहेका हुन्छन् । तर, शारीरिक सम्बन्ध मानिसका लागि आवश्यक त छ नै, यसले स्वास्थ्यमा अनेकौँ फाइदा पनि पुर्‍याउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । शारीरिक सम्बन्धले स्किन र कपाललाई समेत सुन्दर र चम्किलो बनाउन भूमिका खेल्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।डन्डिफोरबाट छुटकाराशारीरिक सम्पर्कका कारण शरीरमा हर्मोनको तह सन्तुलित हुन्छ । जसकारण मनिसलाई डन्डिफोरको तनावबाट मुक्त हुन मद्दत मिल्छ ।स्किनमा चमकशारीरिक सम्पर्कले स्किनलाई ग्लोइङ राख्छ भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यस्तो क्रियाकलापले शरीरको रक्तसञ्चारमा तीव्रता ल्याउँछ । जसकारण...
तीतोपाटी डट कम - अर्कै महिलाको पाठेघर (गर्भाशय) प्रत्यारोपण गरिएकी एक महिलाबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा बच्चा जन्मिएको छ । यस घटनालाई विश्वकै चिकित्सा विज्ञानमा ठूलो उपलब्धि भएको भनी चिकित्सा क्षेत्रका व्यक्तिहरुले प्रचारप्रसार गरेका छन् गर्भाशय प्रत्योपित महिलाबाट अमेरिकामा यो पहिलो पटक बच्चा जन्मिएको अमेरिकाको टेक्सासमा रहेको अस्पतालले पुष्टि पनि गरेको सिहन्वाले दिएको समाचारमा उल्लेख छ।अमेरिकी राज्य टेक्सासको डालासमा रहेको ‘द बेइलर स्कट एण्ड ह्वाइट मेडिकल सेन्टर’ नामक अस्पतालमा शुक्रबार ती अमेरिकी महिलाले बच्चा जन्माएकी हुन् । उक्त अस्पताल हाउसटनबाट करिब ४०० किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ । उक्त अस्पतालले एक्काइसौँ शताब्दीमा प्राप्त चिकित्सा क्षेत्रका केही उपलब्धिमध्येको एक उपलब्धिका रुपमा महिलाको प्रत्यारोपण गरिएको...
डा. राजु पौडेल कन्सल्टेन्ट न्युरोलोजिस्ट ग्रान्डी अस्पताल - स्ट्रोक अर्थात् पक्षघात जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ । यद्यपि, मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएकाहरूलाई सम्भावना बढी हुन्छ । वर्ल्ड स्ट्रोक अर्गनाइजेसनका अनुसार विश्वमै ६ जनामा एक व्यक्तिलाई जीवनको कुनै न कुनै मोडमा कम्तीमा एकपटक पक्षघात हुन्छ । अचानक एकातर्फको मुख बांगिनु, हात उचालेर राख्न नसक्नु, बोल्दाबोल्दै बोली लरबरिनु आदि पक्षाघातका लक्षण हुन् । यस्ता लक्षण देखिए जतिसक्दो चाँडो उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ । लक्षण देखिएको तीन घन्टाभित्र उपचार गराउन सके बिरामीको ज्यान बचाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।पक्षाघात हुँदा दिमागसम्म रक्तसञ्चार हुन सक्दैन । यो अवस्थामा हरेक सेकेन्ड दिमागका ३२ हजार कोष मर्ने...
तीतोपाटी डट कम - जब म २० वर्षकी थिएँ तब एक च्यारिटीले युनिभर्सिटीमा मेरा लागि एक बक्स पठाएको थियो । उक्त बक्समा ओरल सेक्सलाई सुरक्षित बनाउने उपकरण थिए ।जब मलाई उक्त बक्स सुम्पिइयो त्यो यौन सुरक्षाका लागि थियो भन्ने मलाई भान भयो । त्यो देखेपछि मलाई भित्री रुपमा जिज्ञासा पनि पैदा भयो । उक्त बक्सभित्र रहेको एक सानो फाइल प्याकेज निकालें । पहिलो पटक मेरो सामना ‘डेन्टल ड्याम’ सँग भयो । यो ओरल सेक्सको क्रममा प्रयोग गरिने रबरको एक आवरण हो ।डेन्टल ड्यामलाई साधारण शब्दमा मुखको कण्डमको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यो लेटेक्सको वर्गाकार वा आयताकार टुक्रा हुन्छ जसलाई योनीमा...
तपाईं यौन आनन्दको अन्तिम खुडकिलोसम्म पुग्न असफल भइरहनुभएको छ ? चरम आनन्द (अर्गाज्म) भन्दा अघि नै चिसिनुहुन्छ ? अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार महिलाले चाहे हरेक पटक चरम सुख उठाउन सक्छन् ।त्यसको लागि धैर्यता र यौनसाथी बीच उचित तालमेल हुनु जरुरी छ ।के साँचो हो भने पुरुष बिनाकुनै समस्या हरेक पटक चरम आनन्दसम्म पुग्छन्, महिलालाई भने समय लाग्छ । कतिपय अवस्थामा महिला आफ्ना पतिसँग दिनहुँ यौन सम्बन्ध राख्न इच्छुक हुँदैनन् । यसो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यौन साथी आफूभन्दा पहिले चरम आनन्दसम्म पुग्नु पनि हो ।यस्तो हुँदा कम उमेरका युवतीमा आफूमा केही कमी रहेको भ्रमले डेरा जमाउन थाल्छ, उमेरको साढे तीन दशक...
‘बिरामीको अकालमा मृत्यु भए चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति’
तीतोपाटी डट कम - डाक्टरको लापरबाहीका कारण बिरामीको अकालमा मृत्यु या गम्भीर घाइते भएमा पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाटै भराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले लापरबाही गर्ने चिकित्सकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । पछिल्लोपटक अस्पतालमा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको अकालमा मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुने समस्या देखिएकाले ती पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाटै भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संवाददाताहरूसित भने । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले उक्त निर्णयको चर्काे विरोध गरेको...
प्राथमिक उपचार दिवस
दुर्घटना र आकस्म्कि अवस्थाहरु अप्रिय छन् तथापि मानवले यस्ता घटनाहरु घट्न सक्ने नकारात्मक संभाब्यतालाई शुन्य बनाँउन सक्दैन् । दुर्घटनाहरु जहँ पनि, जहिले पनि अनि जसलाई पनि हुन सक्छन । प्राथमिक उपचारको ज्ञान भएमा घाईतेहरुलाई जोखिमवाट कम गर्न सकिन्छ, दुर्घटनालाई बिछोडमा रुपान्तरण हुन नदिएर ज्यान जोगाउन सकिन्छ । प्राथमिक उपचारको सीपको कुरा गर्दा धेरै जनाले बिधालय स्तरमै, कसैले पेशागत अनि कार्यगत रुपमा सिकेको हुन सकिन्छ । यदि तपाँईले अहिलेसम्म प्राथमिक उपचारको तालिम लिनु भएको छैन भनें यसै आलेखका साथ यस तालिममा सहभागी भई आफ्नो समुदाय र राष्ट्रप्रतीको दायित्वका रुपमा प्राथमिक उपचार तालिममा सहभागी हुन आव्हान पनि गर्दछौं । दुर्घटनाहरु अस्पतालको दैलोमा मात्र...
डा. राजेन्द्र भद्रा सपना र यौन तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिले सपना र यौनका सम्बन्धमा केही चर्चा गरौं । निदाइरहेका बेला एकपछि अर्को चित्र, विचार, भावना एवं संवेदना अचेतन रूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो । मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि कुनै व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन । सपना विशेष गरेर Rapid Eye Movement (REM) sleep (निद्रा) को स्थितिमा देखिन्छ । सपना विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो वा यौनसम्बन्धी । यस्तो REM को स्थितिमा यौनाङ्गमा रगत भरिन्छ र पुरुषको लिङ्ग उत्तेजित अनि महिलामा योनिश्राव भएको पाइन्छ । यौनसम्बन्धी...
डा. राजेन्द्र भद्रा हाम्रो विवाह भएको १८ वर्ष पूरा भयो । म उमेरले ३८ वर्षकी भए भने उहाँ ४६ वर्ष पुग्नुभयो । यो अवधिमा मैले तीन स्वस्थ सन्तानकी आमा बन्ने सौभाग्य पनि पाएकी छु । अहिलेसम्म मेरो यौनजीवन पनि आनन्दायक नै छ । म स्वस्थ भए पनि तीन वर्षदेखि श्रीमानचाहिँ मधुमेह (डायबिटिज) बाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँ तीन–तीन महिनामा मधुमेह स्तर जाँच गराउनुहुन्छ । यस अवधिमा एक–दुई पटकबाहेक उहाँको सुगरको स्तर नियन्त्रित देखियो । उहाँ सामान्य ढंगले दैनिक कार्य गर्नुहुन्छ । तत्कालै हामी दुईबीचको यौनसम्बन्धमा यसको नकारात्मक असर पनि परेको छैन । यो उमेरमा पनि प्रत्येक रात एकपटक त सम्पर्क...
हृदयरोगबाट बच्न नेपालमा हुने मुटुका उपचारहरू
2017-08-19 | तीतोपाटी डट कम
डा.प्रेमराज वैद्य (वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ) - नेपालमा पछिल्लो समय मुटुको उपचारमा ठूलो प्रगति भएको छ। हृदयघात रोक्न सक्नेसम्मको प्रविधिको विकास भएको छ। समयमा नै एनजीयोग्राफी गरेर मुटुको एनजीयोप्ल्यास्टी वा बाइपास अपरेशन गर्‍यो भने हृदयघात रोक्न सकिन्छ।जनचेतनाको अभावले यसले अझै व्यापकता पाउन सकेको छैन। एनजीयोप्ल्यास्टी वा बाइपास अपरेशन गर्नुभन्दा पहिला एनजीयोग्राफी (मुटुको धमनीहरुको एक्सरे) गर्नुपर्छ। एन्जीयोग्राफी गरेपछि मुटुको धमनीहरु कति बन्द भएका छन् भन्ने थाहा हुन्छ।यसलाई कोरोनरी एनजीयोग्राफी पनि भनिन्छ। कोरोनरी एनजीयोग्राफी गर्‍यो भने धमनीको अवरोध थाहा हुन्छ। सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी अवरोध रहेछ भने त्यसलाई एनजीयोप्ल्यास्टी गरेर खोल्नैपर्छ वा बाइपास अपरेशन गर्नुपर्छ।सत्तरी प्रतिशत भन्दा कम अवरोध छ भने नियमित औषधीहरु, खानेकुरा...
योगासन र स्वास्थ्य
तीतोपाटी डट कम - सत्ययुगमा भगवान् शिवबाट रचना गरिएको सम्पूर्ण वेदान्तको सार पाशुपत योग हो। यस योगमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि समतावस्थालाई पाशुपत अष्टांगयोग भनिएको छ।चित्र वृत्तिहरूलाई निरोध गर्दै मात्र परमेश्वरमा एकचित्तता नै योग हो। अनेक जन्मको संस्कार बल बन्धन रूपपाशमा आबद्ध ‘जीवात्मा' पाशुपत योग साधनाद्वारा पाशबाट मुक्त हुँदा तत्क्षण ‘परमात्मा'बन्न पुग्छ। पाशुपत व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, सरलता, धृति, मिताहार, पवित्रता, तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजन, लज्जा, जप, मति, व्रत, सिद्धान्त श्रवण यी पाशुपत व्रतको विशेष अंग हो। यसमा एकमात्र अंगको छुट हुन गएमा यस योगको व्रत लुप्त हुन जान्छ। यी बीस...
स्वाइन फ्लुबाट एकजनाको मृत्यु
2017-07-27 | तीतोपाटी
तीतोपाटी डट कम- स्वाइन फ्लुका कारण स्याङ्जाको वालिङमा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । उपचारका क्रममा काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वालिङ–१४ का ४९ वर्षीय खुमप्रकाश अर्यालको गत सोमबार मृत्यु भएको हो । ‘अर्यालको मृत्यु स्वाइन फ्लुका कारण भएको पुष्टि सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ’, वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा सन्चालक समितिका संयोजक दिलीपप्रताप खाँणले भने, ‘वालिङ तथा आसपासका क्षेत्रमा स्वाइन फ्लुको प्रकोप हुनसक्ने भएकाले सचेत भएर रहन स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेका छौँ ।’ अर्यालको मृत्युसँगै अहिले वालिङ तथा आसपास बासिन्दा स्वाइन फ्लुका कारण त्रस्त बनेका छन् । स्वाइन फ्लुको नमूना परीक्षणका लागि काठमाडौंबाट शुक्रबार (भोलि) एकटोली वालिङ आउँदै छ भने आवश्यक...
मानव जाती लोप हुने खतरा - बैज्ञानिकहरू
2017-07-27 | तीतोपाटी डट कम
तीतोपाटी डट कम - पुरुषहरुको वीर्यमा शुक्राणुहरुको संख्यामा अहिलेकै दरमा कमी आउने हो भने संसारबाट मानव जातीको लोप हुनसक्ने खतरा पैदा भएको शोधकर्ता वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।करिब २ सयभन्दा बढी अध्ययनको नतिजापछि यो चेतावनी दिइएको हो ।शोधकर्ताहरुका अनुसार उत्तर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रलिया र न्युजिल्याण्डका पुरुषहरुमा पछिल्ला ४० वर्षमा शुक्राणुहरुको संख्या घटेर आधा भएको छ ।यद्यपि, मानवको प्रजनन प्रक्रियामा आएको यस रिपार्टमा केही विशेषज्ञहरुले सन्देश पनि व्यक्त गरेका छन् ।शोधकर्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर हगाई लेविनका अनुसार आफू अध्ययनको नतिजाबाट चिन्तित बनेको र आगामी समयमा खतरा भएको उल्लेख गरे ।अध्ययनको विश्वसनीयताशोधको नतिजाको मूल्यांकन मात्राको आधारमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो अध्ययन हो ।...
म मा बढी यौन इच्छा छ तर मेरो श्रीमानले सन्तुष्टी दिन सक्दैन
2017-07-18 | titopati.com
म ३७ वर्षकी भए। मेरो श्रीमान् ४१ वर्षको हुनुहुन्छ। श्रीमान्मा भन्दा ममा बढी यौन इच्छा छ। पहिले उहाँको इच्छा बढी थियो। हाम्रो विवाह भएको १० वर्ष भैसक्यो जब म इच्छा राख्छु, उहाँ मुड छैन, शरीर दुखेको छ, अल्छी लागेको छ भनेर टार्नु हुन्छ। अहिले मलाई कतै उहाँको अरूसँग यौन सम्बन्ध त छैन भन्ने लाग्न थालेको छ । यो मेरो शंका मात्र हो कि वास्तविकता ? जसका कारण म निराश छु। यसको केही समाधान छ ?»»» यौन चाहनासम्बन्धी यस्ता प्रश्न धेरैले राख्ने गरेको मैले पाएकी छु। चिकित्साशास्त्रको भाषामा यसलाई यौन चाहनामा भिन्नता भनिन्छ। धेरैजसोले महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी यौन इच्छा हुन्छ...